Tsy misy mahataitra: Mahazatra ao Shina ny Backdoors sy ny Spyware (rindrambaiko Mpitsikilo) Amin’ny Finday Avo Lenta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 6:51 GMT
Kryptowire, orinasam-piarovana, dia nahita vao haingana fa maro ireo maodelina finday Android no nametraka rindrambaiko mitoetra mandrakizay, fantatra ho toy ny firmware, izay ampiasaina ho varavarana ambadika ( backdoor) manangona ny rakitra manokana sy saropady, ahitana ny hafatra amin'ny finday (SMS), famantarana ny toerana misy amin'ny alalan'ny finday, lisitry ny mpifandray, lisitry ny antso ary mampita izany ho amin'ny lohamilina ivelan'ilay orinasa ao Shanghai, Shina.
Noforonin'ny orinasa Sinoa Shanghai ADUPS Orinasan-Teknolojia ilay firmware. Nohamarinin'ny ADUPS ny tatitra tamin'ny fanambarana manazava fa ”vahaolana” iray ho an'ny fangatahan'ny Shinoa mpanamboatra finday mba ”hanamarika ireo hafatra sy antso tsy iriana” io ho famaliana ny fitakian'ireo mpampiasa. Niteny izy fa ireo hafatra voangona dia hohadihadiana mba ”hamantarana ireo hafatra tsy iriana” ary ”hanatsaràna ny traikefa fampiasàna ny finday.”
Tamin'ny 2015, nahatsikaritra ihany koa ny orinasa G-Data miorina ao Alemana fa 26 raha kely indrindra ireo marika finday Android no nametraka ilay rindrambaiko mpitsikilo tany anatin'ireo finday avo lentan-dry zareo. Voatanisa tao avokoa ireo Sinoa telo mpanamboatra finday avo lenta, Xiaomi, Huawei sy Lenovo.
Ilay lalàna ‘Cybersecurity’ Sinoa nolaniana vao haingana dia nanome fototra ara-dalàna ho an'ny tetikasa varavarana ambadika. Takian'ilay lalàna ny hitahirizan'ireo ”mpandraharaha mpitantanana fotodrafitrasa saropady momba ny torohay” ireo ”torohay manokan'ny mpampiasa sy ny rakitra ara-barotra manandanja” ao Shina.
Takian'ireo lalàna hafa ihany koa, toy ny Lalàna ho Fiarovana ny Ankizy (mbola vakiraoka), ny orinasa mpanamboatra fitaovana mba hametraka mialoha rindrambaiko fanarahamaso amin'ireo fitaovan-tserasera sy hampifanaraka amin'ny lalàna ireo fomba fanatonana manokana hiatrehana ny fiankinandoha amin'ny aterineto, izany rehetra izany ho an'ny tombontsoan'ny fiarovana ny ankizy.
Ho fanampian'ny fanarahamaso ny rakitra manokana araka ny fitakian'ny lalàna, matetika mitroka fampiasa amin'ny Android avy amina tsena hafa tsy ofosialy ireo Sinoa mampiasa finday Android taorian'ny nialàn'i Google tao Shina tamin'ny 2010. Ireo tsena Android ireo dia tondraky ny fampiasa misy rindrambaiko malware izay afaka mangalatra sy manodinkodina ny rakitra manokana.
Tamin'ny 16 Novambra, notaterin’ny New York Times fa manambara ireo manampahefana Amerikana hoe tsy mazava raha toa ka maneho fitrandrahana ny rakitra manokana ho amin'ny tanjona ara-barotra io, na ezaky ny fanjakana Sinoa mba hanangonana ny mombambomba ny tsirairay.